Travel World: June 2013
Posted by Travel at 10:24 PM0comments
Posted by Travel at 10:23 PM0comments
စပိန်ခရီးသွားရာသီဖြင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ကို ဧည့်သည် ၃ သန်းလာဖို့ ကြိုဆိုကြပါစို့။
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/b005aa88-dce4-40a8-b71b-c9069b79a251%40googlegroups.com.
Posted by Travel at 4:56 AM0comments
— with Thatoe Thuzaraung, TinTin Aye, Nini Khet, Soe Kyaw Thu and
Soe Kyaw Thu, Nyein Nyein Aung, Nann Wai Lwin and 141 others like this.
A MA RA နန်းဘုရားတည်ဆောက်သေါခေတ်မှာအနော်ရထာမင်းကြီးလက်ထက်နောက်သိပ်မဝေးဟုယူဆရပါသည်။မနူဟာမင်းကြီးစံနန်းတော်နေရာတွင်
မြစ်တော်နာဂသမန်းကတည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟုအဆိုရှိပါသည်။ (စိတ်မရှိပါနဲ့နော် )
YarZar Myo right A MA RA
Thiha Maung Maung မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့သမိုင်းကြောင်းအထောက်အထားကို
နန်းဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ ကချေသည်တွေနဲ့အတူ နဘမ်းသတ်နေတဲ့ လူပုံတွေကို
အဲဒီဆေးရေးထဲမှာ ထည့်ရေးဆွဲထားပါသတဲ့။ အာစရိ
အဲဒီနံရံဆေးရေးပန်းချီလေးများရရင် တင်ပေးပါဦးအာစရိရယ် ...
Myo Swe Than နာဂသမန်းက အနန္တသူရိယပါပဲ
နရပတိစည်သူရဲ့ ရာဇဝတ်သင့်ခြင်းကိုခံရတဲ့ အမတ်ပါ။
Yan Naing Htun I am happy to read historical discovery. Thanksalot.
Myo Swe Than ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါ်အမရာနှင့်် ကိုရာဇာမျိုး
အမရပူရရေမြောင်းဖုံး လှန်တော့ကျောက်စာက နရပတိစည်သူက
ရာဇဝင်မှတ်တမ်းတွေထက် ၈ နှစ်စောနေပါပြီ။
Myo Swe Than သီဟ နန်းဘုရားမှာနံရံပန်းချီမရှိဘူး
A MA RA နာဂသမန်းကမွန်လူမျိုး ၁၁ ရာစုပါ နန်းဘုရားကလဲ
၁၁ရာစုဘုရားပါရှင် အနန္တသူရိယ က ၁၃ ရာစုပါ သူ့မျက်ဖြေလင်္ကာက
သူတည်းတယောက်ကောင်းဘို့ရောက်မူ.....ပါ ကျမတို့အနေနဲ့ ရှေးဟောင်းက
စာအုပ်တွေကိုမှီငြမ်းရတာကြောင့် ဒီစာအုပ်တွေတိုင်း ပြောပြတာပါ
Myo Swe Than ဟုတ်ကကဲ့ပါ အရင်ဆုံးက
၁၁ ရာစုမြန်မာက စကားပြေတောင်
မတ်ပေါင်းရံလျက် မှာ ကြငန်း ဆိုတဲ့အသုံး ပုဂံခေတ်မှာမသုံးသေး
တွေကို ဒေါက်တာသန်းထွန်းက ရှင်းသွားခဲ့ပါတယ်၊စာတမ်းလည်းဖတ်ပါတယ်၊
ဒါကဗျာနဲ့ ပတ်သက်လို ပါ
Myo Swe Than ဒီဇတ်လမ်းက အနော်ရထာနဲ့မနုဟာထက်
ကျန်စစ်သားမင်းကြီးရဲ့ ထိုးဇတ်က ပိုပြီးသံသရာရှည်ခဲ့လို့ ပါကျွန်တော်လည်း
အမှတ်မှားခဲ့ဘူးပါတယ်၊ အနော်ရထာက ပိဋကတ်သုံးပုံလိုချင်လို့ 
ကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာပါ အဲဒီကနေယူတယ်
ဒီနေ့ မိကွန်ချမ်း၊ ထူးအိမ်သင်သမီးက
ဒီနေ့မိကွန်ထောဖြစ်ပြီး ၁၁ ရာစုက
ခင်ဦး ဆိုတော့လည်း ဒီဇာတ်နားလောက်က
Myo Swe Than ဒီဇာတ်လမ်း ရာဇဝင်မှာ ပညာရှင်တွေက
Myo Swe Than ကျွန်တော် ပုဂံမှာ ရှိတဲ့ ပိဋကတ် ၃
အားလုံးက 4th edition ပါ သထုံမှာရှိတာက 3rd edition ဖြစ်ပါတယ်၊
Myo Swe Than ပြီးတော့ ပုဂံမှာ ရှိသမျှသော နံရံပန်းချီများ က
ခုဒ္ကက နိကာယ်တစ်ခုတည်း ကချည်းပဲဖြစ်ပါတယ်၊
ဒါဆိုရင် စောစောက မွန်မင်းသမီးနဲ့ 
ပိဋကတ် ၃ ပုံလိုချင်လို့ တိုက်တဲ့
ရီဝေယံတော့ အသည်းနှလုံးထဲကမဏိစန္ဒာ ဆက်ရိုက်ချင်ရိုက်ပေါ့။
Thiha Maung Maung ဟုတ်လားအားစရိ ဆရာမန်းသင့်နောင်(ကော့ကရိတ်)
ရေးတဲ့အထဲမှာ (ကျွန်တော့်ဘေးမှာ စာအုပ်မရှိတော့
အမှတ်မှားသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်) ဖတ်ဖူးလို့ပါ။ အဲဒါဆိုရင်တော့
အာစရိပြောတဲ့ နဂါးရုံဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ မြန်မာ့လက်ဝှေ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေတိုင်းမှာ ပုံမပါလို့ပါ။ ဥပမာ ဆရာမြ၀င်း၊
A MA RA ကျမတို့အနေနဲ့လဲ
နန်းဘုရားဟာ ၁၁ ရာစုနောက်ပိုင်း ၁၂ ရာစုအစပိုင်းဆိုတာ
စကော်လာအားလုံးသိကြပါတယ် ရာဇကုမ္မာရ ၁၁၁၃
မှာရေးထိုးခဲ့တဲ့မြစေတီကျောက်စာမှာ ပျူ မွန် မြန်မာ ပါဠိ ၄ဘာသာပါပါပြီ
ဒေါက်တာသန်းထွန်းကလဲ နန်းဘုရားကို အနန္တသူရိယ ၁၃ ရာစု တည်တယ်မပြောခဲ့ပါ
ကျမပြောတာတွေဟာ ကျမပါးစပ်နဲ့ စိတ်ကူးထဲကစကားများမဟုတ်ဘဲ
ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်ရောက်နေပါတယ် ခုဘဲ ပြည်ကပြန်လာတာပါ
Myo Swe Than အေး ဟုတ်တယ်သီဟ ရေ မင်းပြောတဲ့
နံရံပန်းချီရှိပါတယ် ပြီးတော့ တင်ပေးမယ်လေ အခုတော့ နန်းဘုရား
Thiha Maung Maung ဟုတ်ကဲ့အာစရိ မလောပါ။
အာစရိသွားတုန်းလာတုန်းရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုဂံပုံတွေထဲက အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တုန်း
ကြည့်ချင်စိတ်လေးဖြစ်မိလို့ပါ။ အခုလည်း အာစရိတို့ဆွေးနွေးချက်တွေ
Ei San မွန် သထုံ က သူတ္တန် ကို အ ခြေ ခံ တာက ယိုး ဒယား နဲ့ ဆက်စပ်
မယ် ထင် တယ် ယိုးဒယား ထေ ရဝါဒ က သုတ္တန် သန် တယ် ဗမာ က အဘိဓမ္မာ သန် တယ်
သီရိ လင်္ကာ က ဝိနည်း သန် တယ် လို့ ဖတ် ဘူး တယ် ထေ ရဝါဒ သုံးနိုင် ငံ မှာ
ပေါ့ ဟုတ်လား ဆြာ ကျောင်း
Chawchaw Mirror ပုဂံက နန်းဘုရား မှာ နံရံဆေးရေးပန်းချီရှိတယ်တဲ့လား။
ကျမ ရောက်ဘူးတာ အကြိမ် ၁၅၀ ကျော်ပါတယ်။ မတွေ့ဘူးလို့ပါ။ ရှိတယ်ဆိုရင်
Myo Swe Than မ A MA RA ဘာလုပ်ပါသလဲဗျ
ဒီ မနုဟာပြသနာ ကရှေ့ မှာ ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်အမှတ်
မှားခဲ့ကြလို့ နောက်တွေ့ 
နန်းစံနှစ် အမျိုးးမျိုးဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုလည်းသိ
အခုလည်း ကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက် လော့ဂျစ်ကယ် သင်းကင်း
အစ်မက ဇွတ်ပဲ ၁၁ ရာစုဖြစ်ရမယ်ပြောနေပြန်တယ်၊
ကျွန်တော် ပညာရှင်ဟူသမျှတွေ့ ချင်တဲ့
အာသီသရှိပါတယ်။ အဲဒီပြင်သစ် က
နန်ူဘုရားက စာအုပ်တွေထဲမှာ ရှေ့ ကမနုဟာလို့ ကျောက်စာအဖတ်မှားရာကနေ
ထိုးဇာတ်နဲ့ ရောပြီး အမှားကြာခဲ့လို့ 
မကုတ လို့ သာဖတ်လို့ ရမယ့်အကြာင်းကိုပညာရှင်တွေရော
ရှေးဟောင်းကပါ ပြင်ပြီးလို့ အစီရင်ခံစာတွေထွက်ပါတယ်။
အစ်မ ၁၁ ရာစု ဖြစ်ချင်လဲ ဖြစ်ပေတော့
ဆိုရင်တော့ စောစောက ကျွန်တော်ပြောတာတွေမှာ ရှင်းပါပြီ
ဆိုတာပြောရင် ကျွန်တော် တိုက်ဆိုင်ပြောပြပါ့မယ်။
Myo Swe Than ဒေါ်Chawchaw Mirror နန်းဘုရားမှာ နံရံပန်းချီမရှိပါဘူး
Chawchaw Mirror ကျမ ကိုသီဟမောင်မောင်ကို မေးတာပါ။
Myo Swe Than ဆေးချယ်ထားတာတွေတော့ရှိ် တယ်
အကြိမ်၁၅၀ -ရောက်ဆိုတော့ သိမှာပါ။
Chawchaw Mirror စကားမစပ် စကော်လာ ဆိုလို့ပါ ကျောက်ဆစ်လက်ရာ ၄ ခုထဲက
တစ်ခုဆိုရင် ကျန် ၃ ခု အမည် လေးများ သိခွင့် ရှိမလား။
Myo Swe Than အစ်မ ဘာလုပ်သလဲ tour guide လား
Daniel Townsend ma A MA RA, Congratulation!!! this is what we call
professional.. quitealot of guides ( including me) should take good
example of you. I am proud of you ama, also my respect to all others
bretherns who participated in this valuable discussion.
A MA RA ကျမကဧည့်လမ်းညွှန်ဖြစ်ပြီး
ပြင်သစ်ကပညာရှင်ကရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်ပါ ခုဒီမှာရောက်နေပါတယ် ခုလေးတင်
ဒီကရှေးဟောင်းကDr တယောက်နဲ့ပြည်ကပြန်လာပါတယ် အဲဒီဗမာပြည်ကDr
နဲ့လဲမေးလို့ရပါတယ် ကျမကသာမန်ဘဲဆိုတော့ သူတို့နဲ့ပြောရင်ပိုကောင်းလို့ပါ
ဗမာပြည်က Drက Iron Age (ဗမာပြည်)နဲ့ Rennes University of France
Thiha Maung Maung ကျွန်တော် မရောက်ဖူးသေးပါ မချောချောခင်ဗျား၊ ခုနက
ကျွန်တော် မသိတာကို မသိကြောင်း ကျွန်တော့် ဆရာကိုပြောပြီးခဲ့ပါပြီ၊
မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သကသေအထောက်အထား
ခိုင်ခိုင်မာမာရှိပေမယ့် ရုပ်ပုံများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နေရာဒေသအမည်တွေ
လွဲမှားပြီး သိနေတာကိုလည်း ကျွန်တော် ၀န်ခံခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်
အသေအချာသွားဖူးချင်ပေမယ့် အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်သေးလို့ ရောက်ဖူးထားတဲ့
Chawchaw Mirror ( နန်းဘုရားဒုတိယစည်သူလို့ ခေါ်တဲ့နရပတိစည်သူလက်ထက်က
ကုသိုလ်ပါ။)ဆိုတာကိုအရင် သေချာစေချင်လို့ မေးတာပါရှင်။စကော်လာ
ဆိုတော့ ကုသိုလ်ရှင် နာမည်များလွဲ နေမလားလို့ပါ။ ကျမ မှတ်မိတာတော့
မနုဟာမြစ်ဆိုလား။တူဆိုလား ကုသိုလ်ရှင်က လေ။
Nyein Nyein Aung ဟုတ်ပါတယ် ကျောက်ဆသ် လက် ရာ လေး ခု ထဲ က တခုကို
မရှင်း ပါ ကျန်တာ တွေသိပါရစေ
Myo Swe Than မအမရာ ကျွန်တော်ပြောပါတယ်၊
ဆွေးနွေးတာကြိုဆိုပါတယ်ပြောပြီးသားပါ၊ အစ်မက ဆွေးနွေးတာလဲမဟုတ်ဘူး
ဆိုင်သလား သူတို့ နန်းဘုရား ဘယ်နှစ်ကတည်တယ်လိ့ 
ပြောမှာလား။ သူတို့ အထူးပြုထားတဲ့ခေတ်လား
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ်
ဘယ်သူတွေလို့ မပြောနဲ့ ဘယ်သူဆိုတာ ကျွန်တော်ဖြေပေးမယ်၊
Radio Carbon Dating ကိုသိမှာပေါ့ ။
နရပတိစည်သူရဲ့ ကျောက်ဂူဥမင် တည်အပြီး
နောက်နှစ်အနည်းငယ်ကြာမှ တည်ပြီးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျောက်သားနဲ့ သက်တမ်း
တူတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အစ်မသေသေချာချာမသိချင်လို့ ပြောနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အစ်မဧည့်သည်က ဒီအချိန်မှာ ရှေးဟောင်းက ပြင်သစ်မဟုတ်ပဲ ဘောလုံးကန်တဲ့
အခု နောက်တွေ့ အထာက်အထာတွေကဒီလို ဆိုပြီး
Thinking လုပ်ပုံပြောနေတာပါ အစ်မကျက်ထားက ဒီလိုပဲပြောနေတာလေ၊
ဘယ်စာအုပ်လဲ ပထမအကြိမ်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ မေးတာမဖြေဘူး
တစ်ချို့ က အမှားပြင်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ထွက်ပြီးပြီ။
ပြီးရင် ကျွန်တော်ဆက်ပြောမှာပါ။ အခု
Chawchaw Mirror ကျမ သိချင်တာက ဓာတ်ပုံရှင် စကော်လာ ရဲ့ ပုံနဲ့ စာထဲ
မှာ ရေးထားတက(နန်းဘုရားဒုတိယစည်သူလို့ ခေါ်တဲ့နရပတိစည်သူ
မေးတာပါရှင်။စကော်လာ ဆိုတော့ ကုသိုလ်ရှင် နာမည်များလွဲ နေမလားလို့ပါ။ ကျမ
မှတ်မိတာတော့ မနုဟာမြစ်ဆိုလား။တူဆိုလား (နာဂသမန်ဆိုလားဘဲ )ကုသိုလ်ရှင်က
။တင်ထားတဲ့ပုံရယ်။ ကုသိုလ်ရှင် အမည်ရယ် လွဲ နေသလားလို့ပါ။ စကော်လာကို ဆရာ
Nyein Nyein Aung Kyauk Gu Umin Temple
11 thCentury; upper levels added in late 12 th Century
first Edition Dec 2011 by Ma Thanegi
Nyein Nyein Aung The Nanpaya's stones are same type used to built
the 11 century Kyuakgu UminTemple lower level ofagreenish,…
TinTin Aye နန်းဘုရားကိုမနူဟာ၏မြစ်နာဂသမန်းတည်ဒါပါ။
TinTin Aye Better read Prof. Luce's "Old Burma, Early Pagan."
Should see also Aung Thwin's "Mist of Ramayana."
Nyein Nyein Aung နန္ဒသူရိယ ရဲ့ကုသိုလ် ဘုရား က "လေးမျက်နှာ ဘုရား"ပါ ။
Naytun Shein ကျွန်တော်သိတာနန်းဘုရားက မနူဟာမင်းကြီးကောင်းမှု ဆိုတာပါပဲ။
A MA RA Ko Myo Swe Than ကျမမေးခိုင်းတဲ့ဧည့်သည်က Ancient Pyu of
Myanmar ရေးတဲ့ဒေါက်တာပါ ပါမောက္ခ လု့စ်ရဲ့တပည့်ပါ
ပညာရှင်ကျကျပိုသိလို့မေးပါလို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ် Iron Age
လေ့လာသူကလဲသူ့နယ်လေးတခုထဲကွက်ကွက်လေ့လာလို့မရပါဘူး သူကအခု ရှေးဟောင်း
Post Grat ဌာနမှုးပါ ဒီနှစ်မှစဖွင့်ပါတယ်
ကျမတို့လေ့လာတာလဲစာတအုပ်ထဲမဟုတ်ပါ ဦးဗိုကေ ဦးအောင်ကြိုင်
(ရှေးဟောင်းညွှန်ချုပ်) ဒေါက်တာသန်းထွန်း နှင့်တကွ တကမ
Chawchaw Mirror ကိုNay tun Shein နန်းဘုရား က မနုဟာ
မင်းကွယ်လွန်ပြီးမှ တည်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မနုဟာမင်းကြီး
သီတင်းသုံးပြီး မြင်းကပါရွာက သူဌေးကို ကျောက်သံပတ္တမြားတွေ ရောင်းပြီး
မနူဟာဘုရားကို တည်တာပါလို့ ဖတ်မိပါတယ်။သူနတ်ရွာစံ သွားပြီးမှ
နန်းဘုရားကို သူ့ဆွေမျိုးတော်သူကို တည်တာပါလို့ ဖတ်မိပါတယ်။ သေချာတာက
ကုသိုလ်ရှင် အမှန်ဆုံးဖြစ်အောင် (ပုဂံ သမိုင်းစာအုပ် ရှာပြီး အတည်ပြုကြတာ
Soe Kyaw Thu ကောင်းပါတယ် အမတို့ ခုလိုဆွေးနွေးတာ
ခုပဲ တီချယ် Daw April ခေါ် ဒေါ်တင်တင်အေး ကိုမေးနေပါတယ်
ပြောပြပါတယ် Professor Luce ရေးတဲ့ old burma early BAGAN ထဲမှာ
နာဂသမန်း နဲ့ ကျန်စစ်သားသမီး ရွှေအိမ်စည်နဲ့ပေးစားတယ် ဒါပေမယ်
မှန်နန်းရာဇဝင် ကတော့ စောယွန်းနဲ့ပေးစားတယ် ဒေါက်တာသန်းထွန်းကတော့ Pro
Luce နဲ့ပဲ သဘောတူပါတယ်
နန်းဘုရားဟာ နာဂသမန်းရဲ့ ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီး late 11 cent ( 1060 - 1070) မှာပါ
to commemorate the place where his grate grandfather was kept as captive.
Refrance - မှန်နန်းရာဇဝင် နှင့် Acient Myanmar website
နန်းဘုရားမှာ Mural painting နဲနဲရှိပါတယ်တဲ့ ဒါပေမယ့်
နဘန်းသတ်တာကတော့ ကျန်စစ်သားဥမင် သီရိပစ္စယာရွာမှာရှိတဲ့ ဂူ၄၁၈ဃ
ပထမစည်သူ ( 1113-1168)
ဒုတိယစည်သူ ( 1174-1121)
နာဂသမန်းနှင် ဒုတိယစည်သူ နှစ်၆၀လောက်ကွာပါတယ်
ကျန်စစ်သား ( 1084-1113)
နာဂသမန်းနှင့် အနန္တသူရိယအမတ် ကတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပါ
အနန္တသူရိယဟာ နရသီဟပတေ့ ခေါ် တရုပ်ပြေးမင်းလက်ထက် ( 1256-1287)
ကဲ သာဓု ဿာဓု သာဓု
DAW TN TIN AYE ( TOUR GUIDE FROM 1978 TO 1992 IN BAGAN)
Simon's Rock College Great Barrington, M.A , USA
M.A MUSEUM EDUCATION ( UNIVERSITY OF THE ARTS) PHILADELPHIA , PA, USA
M.A Cultural Anthropology
58 minutes ago via mobile · Unlike · 3
Soe Kyaw Thu ဆရာဦးအောင်ကြိုင် ကိုခုဖုန်းဆက်လို့ရပါတယ် ဆရာဆီက
53 minutes ago via mobile · Unlike · 2
Nyein Nyein Aung ပြီးတော့ မေးထား တဲ့ အခြားသဲကျောက်န့ လုပ်ထားတဲ့
အဆာက် အဦး ရှိသေးလို့ သိပါရ စေ
TinTin Aye Pitakataik, Shwezigon, Nanpaya, Kyaukku and new
discovery near Nyaung-oo airport.
Chawchaw Mirror ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
TinTin Aye The last one is said to be onlyasmall building.
Nyein Nyein Aung last one is rare to know .Thus why I asking
MyoSwe Than .he realy know or not.
Soe Kyaw Thu Ok တီချယ်နဲ့ပြောနေပါတယ် သူလဲရေးပေးပါလိမ့်မယ် ၅ခုပါတဲ့
Shwezigon 11 cent
Kyauk ku u min 11 cent
Nanphaya late 11 cent
Pitikatike 13 cent
Recently Discovered place ဆရာဦးအောငကြိုင်ကိုမေးပေးပါမယ်
နောက် တစ်ချက် typing အမှားပြင်ခွင့်ပေးပါ
ဒုတိယစည်သူ ( 1174-1211) ပါ အပေါ်မှာ 1121 လို့ မှားရေးမိပါတယ်
နှစ် ၆၀ ကွာတယ်ဆိုတာ နာဂသမန်းက ကျန်စစ်သားလက်ထက်မို့
အကြမ်းဖျင်းတွက်ကြည့်တာပါ အမှန်ဆို နာဂသမန်းနဲ့ ဒုတိယစည်သူ
နှစ်တစ်ရာကျော် ကွာပါတယ် အနန္တသူရိယနဲ့ဆို အရမ်းကွာလွန်းပါတယ်
အပေါ်မှ ကျွန်တော်ရဲ့ အမ စီနီယာကြီးများအား လေးစားစွာဖြင့်
Nyein Nyein Aung Thanksalot…Teachergyi
Nyein Nyein Aung wellcome La LiLi!
Myo Swe Than ကျွန်တော်ဖြေပါ့မယ်
ကိုယ်ပိုင်အယူအဆနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ ရှိတဲ့သူများပါမလားစောင့်ကြည့်တာပါ
၂ - ရာဇကုမာရရဲ့စက္ကူတိုက်လို့ ခေါ်တဲ့
Myo Swe Than ၄- နန်းဘုရားပါ
Nyein Nyein Aung မြန်မာပြည်မှာ 18 Century မှ စက္ကူ စတင် သုံးဆွဲ ပါ တယ်။
Soe Kyaw Thu Pitakatike က 11 cent ပါ ကျွန်တော် typing အမှားကို
A MA RA ကျောက်နဲ့ဆင်းတုအကြီးကတော့ သမ်းတော်ကြားပါ
Myo Swe Than နောက်ထပ်တွေ့တဲ့ကျောက်အဆောက်အဦက
ကျောင်းမှာ ကျောင်းအုပ်ကြီးလုပ်သွားတဲ့ ပုဂံရှေးဟောင်းညွှန်မှူး
Chawchaw Mirror ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်တင်ထားတဲ့ စာသားထဲက အတိုင်း
နန်းဘုရားကုသိုလ်ရှင်က ( အနန္ဒသူရိယ )လား။ မနုဟာမင်း၏ဆွေမျိုးတော်သူ
(နာဂသမန်း)လား ဆိုတဲ့ အချက် ကို ကိုယ်ပိုင် အယူအဆူ ရယ်။
ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိတဲ့သူများရယ် နဲ့ အဖြေထုတ်လို့ ရမယ် မထင်ပါဘူး။
အခုကျမတို့ ပြောဆိုနေတာက ရှေးဟောင်းရာဇ၀င်က ရှေးဟောင်း ဘုရားတွေရဲ့
အလှုဒါယကာ ကုသိုလ်ရှင် နာမည် အမှား အလွဲကို ဆွေးနွေးနေတာပါရှင်။ ကျမတို့လဲ
စာအုပ်ထဲက သမိုင်းပညာရှင်လေ့လာထားတဲ့ နာမည်ကုသိုလ်ရှင်ကိုဘဲ
မှတ်ထားရပါတယ်။ အခု စတင်ဆွေးနွေးတာက ကုသိုလ်ရှင် နာမည် လွဲတာကို
ဆွေးနွေးတာလို့သာ မြင်ပါတယ်။ ကုသိုလ်ရှင်နာမည် အလွဲကို ကိုယ်ပိုင် အမြင်
။ကိုယ်ပိုင် အယူအဆ နဲ့ ဆွေးနွေးလို့ မရဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
Soe Kyaw Thu still made of sand stone. So there are 5. Not 4.
Myo Swe Than ဟုတ်ပါတယ် စက္ကူတိုက်လို့ခေါ်ဝေါ်တဲ့အတိုင်းပါ။
TinTin Aye is evident that there are five stone structures.
Chawchaw Mirror ( PITAKATIKE ) ပိတ္တဋ်တိုက်လား။ စက္ကူတိုက်လား ဟင်။
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAD6UT2Lm9pF4xGeUhaRndMfENZ_xEKF%2BNBYBBdRT1J%3D1hKeibg%40mail.gmail.com.
Posted by Travel at 9:26 AM0comments
အုပိရေ ၁၂၀၀ ကျေိာ ရောင်းချရပြီး လူငယ်များအကျိုးရှိစေခဲ့သည့် စာအုပ်
10 BOOKS WERE OFFERED TO YGN MTGA, ACCEPTED BY U KO KO LAT,
10 BOOKS TO MDL MTGA, RECEIVED BY KO YE MYAT TUN.
28 BOOKS TO MYAT THU KHA FREE ENGLISH CLASS IN MDL, ACHIEVED BY KO SI THU.
THEN I WILL HELP OUT INLE AND BAGAN ZOON IN JULY.
BEST WISHES TO YOU ALL MTGAS,
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/26924fe1-be88-40b0-bf4d-3d6cc3ca6d5b%40googlegroups.com.
Posted by Travel at 2:29 AM0comments
Posted by Travel at 9:33 PM0comments
Posted by Travel at 9:32 PM0comments
How r u? Where r u working now?
Ma Yin Min
On 26 Jun 2011 21:21, "Lily Kyu" <kyu.lily@gmail.com> wrote:
Hello Ma. Yin MIn,
Hope you are doing well! Nice to meeting in this website. This is Lilly and I used to work in Kandawgyi Palace Hotel as yeas ago.
2011/6/26 YinMin Lwin <yinminlwin@gmail.com>
I think that every tourist guide has different qualification and you
can participate in these activities.
On 6/23/11, Win Htoon <dieudios@gmail.com> wrote:
> dear ko nyi nyi,
> i m win htoon, french speaking tour guide.
> i m really sorry to read ur post.
> sincerely, i appreciate those who voluntarily participate in the
> founding activities of EC group.
> with all due respect, i don't think that it's reasonable so quit those
> activities due to the misunderstanding of friends.
> i don't blame ur friends nor ur decision at all. what i m trying to
> say is that somebody who is capable of achieving such things shouldn't
> give up that easily in this way.
> although i m quite willing to participate like u, i m not enough
> qualified for it. pls let me know how i can participate more
> profoundly in those activities.
> win htoon
> On 6/23/11, aphonemyat <ahuntphone.myat@gmail.com> wrote:
>> ကိုညီညီ ( သရ၀ဏ် ) ခင်ဗျာ။။။
>> ကျွန်တော် အံ့ဘုန်းမြတ်ပါ ။။။ အစ်ကိုနဲ့ အဆက်အသွယ်ရချင်လို့
>> ဖုန်းနံပတ်လေး လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။။။။
>> On Jun 22, 5:43 pm, Ko Nyi Nyi <nyi...@gmail.com> wrote:
>>> ဥက္ကဌ / အတွင်းရေးမှုး/ အမှုဆောင်များအားလုံး
>>> အကြောင်းအရာ ။ ။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ခြင်း
>>> ကျွန်တော်သည် အပေါင်းအသင်းတိုးတက်များပြားရေးကိုလိုလားပါသည်
>>> ။ဧည်.လမ်းညွှန်များဧ။် အကျိုးကိုလည်းအမှန်တကယ်လိုလားသောကြောင်. MTGA
>>> အဖွဲ.ကြီးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ.ပါသည်။ သို.သော်
>>> အမှုဆောင်ဖြစ်သည်.နေ.မှစကာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ
>>> မိတ်ဆွေလျှော.လာပါသည်။ ထို.အတွက်စိတ်မကောင်းပါ။
>>> သို.ပါရ်ျစိုသောလက်ကို မခြောက် လိုတော.ပါသဖြင်. ယနေ.မှစကာ
>>> အမှုဆောင်အဖြစ်မှနုတ်ထွက်လိုက်ပါသည်။ ထိုအတွက်မည်သူ. တွင်မှတာဝန်မရှိ ပါ။
>>> ကျွန်ုပ်သဘောအတိုင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အသင်းကြီးအောင်မြင်ပါစေ
>>> ကိုညီညီ ( သရ၀ဏ် )
>>>ွG / 0789
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAACstJk%3DnoXoMXkt5UxJR6%2BU7%2B6vDwXPX7oXUnxyP5zFNsP70Q%40mail.gmail.com.
Posted by Travel at 9:04 PM0comments
Fwd: Australian Prime Minister, she does it again ......... Iron Lady II ............
I know we have seen this before, but ! !!!!
Australia says NO --
Second Time she has done this!
Version: 2013.0.3345 / Virus Database: 3199/6435 - Release Date: 06/23/13
Care & Share Myanmar Travels
No. 29, 6th Floor, Sanchaung Street, Sanchaung Township,
Tel / Fax : (+951) 518032
Email : info@careandsharemyanmartravels.com
Web : www.careandsharemyanmartravels.com,
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CANwrkakBBQqtdvryEWTL1heX4Gf4JMPGUsz%3DL5ta0N%2BHCSo%3DMw%40mail.gmail.com.
Posted by Travel at 7:48 PM0comments
Re: နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများအတွက် Home Stay အစီအစဉ် ခွင့်မပြုသေး
On Friday, 28 June 2013 14:00:29 UTစောကြီးကတညC်းက ပြောထားတာ သဘောပေါက်သင့်တယ်။+6:30, Thomas Jr. wrote:
*********ဆောင်းပါး တွင် " နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များအတွက် နေအိမ် ငှားရမ်းနေထိုင်ခွင့် Home Stay စနစ်" ဟု Home Stay အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ မှားယွင်းနေပါသည်။
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများအတွက် Home Stay အစီအစဉ် ခွင့်မပြုသေး
နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်သည့်နေရာတခု ဖြစ်သော မန္တလေးတောင်ပေါ်မှ မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – မန်းသားလေး / ဧရာဝတီ)
&lt;a href='http://ox.irrawaddy.org/openx/www/delivery/ck.php?n=a7537b9b&amp;amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'&gt;&lt;img src='http://ox.irrawaddy.org/openx/www/delivery/avw.php?zoneid=59&amp;amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;amp;n=a7537b9b' border='0' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုးများလာသော နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ဧည့်သည်များ အတွက် ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းများတွင် မဟုတ်ဘဲ Home Stay ခေါ် ရပ်ရွာထဲ၌ အိမ်ငှားနေထိုင်ခွင့်ကို ဆွေးနွေးမှုများ ရှိသော်လည်း လတ်တလော ခွင့်မပြုသေးကြောင်း သိရ သည်။
"ဒီကိစ္စ ဆွေးနွေးနေတာတော့ ရှိပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကျနော်တို့ ခွင့်မပြုသေးပါဘူး"ဟု နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့် သည် နောက်ပိုင်းတွင် ရှိလာနိုင်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
"လောလောဆယ်ကတော့ ထိန်းတာပေါ့ဗျာ။ Home Stay က လိုအပ်လာတဲ့ အချိန်ကျရင်တော့ ဒါ ဖြစ်လာမှာပေါ့။ အခု သိပ်အခက်အခဲ မရှိသေးပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေ အလိုက်လည်း ဟိုတယ်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်"ဟု အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းမှ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ ရရှိမှုကို ယမန်နှစ်ကထက် ယခုနှစ်တွင် ၂ ဆခန့် ရမည်ဟု မှန်းဆ ထားကြောင်း၊ ယမန်နှစ်က ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည် ၁.၀၆ သန်းရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် ၂ သန်းခန့် လာရောက်မည်ဟု မျှော်လင့် ထားကြောင်းလည်း ၄င်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လာကြသည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများက ဟိုတယ်နှင့် တည်ခိုခန်း နေထိုင်စရိတ်များ ကြီးမြင့်ကြောင်း၊ ဟိုတယ် မလုံလောက်မှု၊ ၀န်ဆောင်မှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီး၊ အင်တာနက်၊ လုံခြုံရေး စသည့် ကိစ္စများတွင် အားနည်းချက်များ ရှိနေကြောင်း ထောက်ပြ ပြောဆိုနေကြသည်။
ထိုသို့ ထောက်ပြပြောဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၀န်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူက"ဒါကတော့ အားနည်းတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဘာ ဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်က သိပ်မှ မကြာသေးတာလေ၊ အခုမှ Boom (ဖွံ့ဖြိုးစ) ဖြစ်လာတာဆိုတော့ အစပိုင်း မှာ တော့ ဒီလို ဖြစ်နေမှာပါပဲ"ဟု ပြောသည်။
ထို့အတွက် ဟိုတယ်ဇုန်များ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်းများလုပ်ဆောင်နေပြီး ထိုလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အမျိုးသား ဓနရှင်များ က အများစု ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားမှ တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် ရန်ကုန်၌သာများကြောင်း သူက ဆက် ပြော သည်။
အခြားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ လေကြောင်း၊ လေဆိပ်၊ ကား၊ ရထား၊ တယ်လီဖုန်းနှင့် အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများပါ ပိုမိုကောင်းမွန်ရန် စီစဉ်နေကြောင်းလည်း သိရသည်။
"အခု ကျနော်တို့ နောက်ဆုံး လုပ်နေတာတော့ ဗီယက်နမ် ကုမ္ပဏီနဲ့ လုပ်နေတာ ရှိပါတယ်"ဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်သာမက ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ အရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းနှင့် ဧည့်လမ်းညွှန် များအတွက်ပါ ၀င်ငွေ ရရှိနိုင်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အတွက် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် နှစ်စဉ် ၃ သန်းခန့် ၀င်ရောက်နိုင်ရေး ကြိုပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က နိုင်ငံတော် စီမံကိန်း ကော်မရှင် အစည်း အဝေးတွင် ယမန်နေ့က အစိုးရသတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိစ္စများကိုလည်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း ၀န်ကြီး ဦးဌေးအောင်က ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ က မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်လာပြီး နောက်ပိုင်း စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ ဖယ်ရှားခြင်းကြောင့် ပွင့်လင်းစ ပြုလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံတကာမှ စိတ်ဝင်စားမှုများ ပိုလာပြီး ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများလည်း တိုးများလာနေသည်။
မကြာသေးခင်က နေပြည်တော်တွင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်ကို ပထမဆုံး အကြိမ် ခမ်းနားစွာ ကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံလိုသူများက မြန်မာအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုများ ပိုလာသကဲ့သို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများလည်း ပိုမိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်။
ယခုအခါ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မဟာစီမံကိန်းတခု ရေးဆွဲနေ ကြောင်း၊ မကြာခင် လပိုင်းအတွင်း ထွက်လာမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စီမံကိန်း အတိုင်း ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်မည်ဖြစ် ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
"Master စီမံကိန်းမှာ မဟာဗျူဟာ ၆ ခု ရှိပါတယ်။ တကယ့် Plan အနေနဲ့က ၃၈ ခုရှိတယ်။ အဲဒီ ၃၈ ခုကို ကျနော်တို့ က အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ နီးပါး သုံးမယ်မှန်းဆထားတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကျနော်တို့ ဦးစားပေး လုပ်မယ့်ဟာက ၂၁ ခု ရှိတယ်။ အဲဒီ ၂၁ ခုကိုတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ လောက် သုံးဖို့ လုပ်သွားမယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း နိုင်ငံတကာက ကမ်းလှမ်းနေတာတွေ ရှိပါတယ်"ဟု သူက ပြောသည်။
အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ADB မှ အဆိုပါ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း ၂၁ ခုအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ကူညီပေးမည် ဟု ယခုလဆန်းက ကြေညာခဲ့သည်။
၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့် တာဝန်သိ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဥပဒေများလည်း ရှိနေ ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ပိုမိုပြည့်စုံသည့် မူဝါဒများလည်း ရေးဆွဲနေကြောင်း၊ လာမည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ခန့်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ၇ သန်းခန့် မျှော်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
"အစိုးရဘက်ကတော့ တိုရစ်ဇင် (ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း) တကယ့် ဆိုက်တွေမှာ ဌာနဆိုင်ရာတွေက ဘယ်လို ပူးပေါင်း ပါဝင်ရမယ်။ ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ ဘယ်လို ဘတ်ဂျက် ခွဲဝေ သုံးမလဲ၊ နိုင်ငံခြား အထောက်အပံ့နဲ့ ဘယ်လောက် သုံးမလဲ၊ ကျနော်တို့ ဒါ ဆွေးနွေး နေတုန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်"ဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လွန်ခဲ့သည့် မေလ ၃၀ ရက်နေ့ကလည်း ဂျာမနီနိုင်ငံ Hanns Seidel Foundation နှင့် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနတို့အကြား နားလည်မှု စာချွန်လွှာတခုကို နေပြည်တော် ၌ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြသေးသည်။
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/fd78f527-23c3-4d86-b62c-6cb58b8c3aa0%40googlegroups.com.
Posted by Travel at 7:32 PM0comments
Fwd: နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများအတွက် Home Stay အစီအစဉ် ခွင့်မပြုသေး
Happy to share the Policy for Community Involvement in Tourism in Myanmar with guidelines incorporated. Will soon be sharing the Myanmar translated version .
From: Thomas Latt <thomasjrlatt@gmail.com>
Subject: နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများအတွက် Home Stay အစီအစဉ် ခွင့်မပြုသေး
To: travelmyanmar <travelmyanmar@googlegroups.com>
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAH_Rx9gQKQMyMRMr-OXJ%2BdLBS0SGOeEb7poJO7WpBtZ-BqNWLg%40mail.gmail.com.
Daw Kyi Kyi Aye
10B, R202, Dagon Lwin Street,
Myittanyunt, Tamwe, Yangon
Tel: (95 1) 559252/ 541769
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CANRBAQBB4iTpU%2BhUE-yUApuF_zwz9Wk0_nOZwDiX35qMJWFnOA%40mail.gmail.com.
Posted by Travel at 7:29 PM0comments